Khalad yar oo guud ayaa ka soo baxaya barnaamijka YouTube-ka ee Apple TV | Waxaan ka socdaa mac
Yaan aqoon YouTube? Waxaan u qaadaneynaa in qof walba waligiis adeegsaday adeegga Google. Caadi ahaan waxaa lagu sameeyaa Webka laakiin waa run in dad aad iyo aad u tiro badan ay arkayaan sida barta looga helo telefishinada casriga ah iyo in ka badan iyo Apple TV. Si kastaba ha noqotee, waxaa dhawaan la ogaaday in dhibaatooyin ay u soo ifbaxayaan dadka isticmaala qaarkood madalna aan laga heli karin qalabka Apple. Kuwa mas'uulka ka ah YouTube ayaa baaraya sababaha dhibaatada.
Aad iyo aad ayey u soo noqnoqoneysaa marin u helka barnaamijyada madadaalada ee hadda jira, iyadoo loo marayo qalab kale. Tusaale ahaan, waxaan awood u leenahay inaan ka soo galno YouTube-ka aaladda Apple TV. Gaar ahaan iyada oo loo marayo Apple TV 4k laakiin dhibaato ayaa soo ifbaxeysa in dadka isticmaala qaarkood ay ka warbixinayaan golayaasha taageerada iyo waliba shabakadaha bulshada qaarkood. Xilligan Apple horay uma soo bixin laakiin haddii kuwa masuulka ka ah YouTube.
Kooxda YouTube ayaa soo warisay iyada oo loo marayo shabakadda bulshada ee Twitter in runtii ay jiraan qaar adeegsadayaal ah oo ka warbixinaya dhibaatooyin markii ay ciyaarayaan fiidiyowyo ay martigelisay YouTube iyaga oo adeegsanaya Apple TV.
Waad ku mahadsantahay inaad fidisey - waxaan aragnay warbixino la mid ah halka barnaamijka YouTube uusan ka shaqeyneyn Apple TV, waana fiirineynaa.
- TeamYouTube (@TeamYouTube) March 20, 2021
Waad ku mahadsantahay dirista jidkayaga - waxaan aragnay warbixino isku mid ah oo tan ku saabsan waxaanan hadda ka shaqeyneynaa hagaajin. Dib ayaan idinkala socodsiin doonaa marka aan helno cusbooneysiin.
- TeamYouTube (@TeamYouTube) March 22, 2021
Isticmaalayaasha qaar oo ka socda Bulshada Taageerada Apple Waxay ku heleen guul shaqo la xiriirta ka-saarista iyo dib-u-dhigista barnaamijka YouTube-ka ee TV-ga Apple TV ka dibna la soo saxiixashada xulashada "adeegso taleefankayga". YouTube ma aadan siinin wakhti go'an oo arinta la xalin doono, laakiin iyagu waa joogaan oo sida xaqiiqada ah xalka ayaa dhawaan halkaas ku sugnaan doona. Isla marka ay jiraan warar ku saabsan mowduuca, waan la socon doonnaa waana kuu sheegi doonnaa.
Waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano haddii dhibaatooyinkan ku saabsan YouTube-ka ay ka soo baxayaan meelaha sare ama haddii, liddi ku ah, wax walba ay si habsami leh u socdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Khalad aan aad u baahnayn ayaa ka soo baxaya barnaamijka YouTube-ka ee Apple TV
Saddex abaalmarin oo cusub Ted Lasso